Fanisana 28 - Ny Baiboly
Fanisana toko 28
Fandaharana ny sorona haterina isan'andro, isan-tsabata, isaky ny voaloham-bolana ary isaky ny fetin'ny Paka sy ny fetin'ny Herinandro.
1Niteny tamin'i Moizy Iaveh nanao hoe: 2Ento amin'ny zanak'Israely izao didy izao, ka lazao aminy hoe: Tandremo ny fanaterana ara-potoana voafetra ny fanatitra ho ahy, dia ny fahana ho ahy amin'ny sorona atao amin'ny afo izay mani-pofona amiko.
3Lazao aminy hoe: Izao no sorona atao amin'ny afo, haterinareo ho an'ny Tompo: isan'andro, zanak'ondry roa, efa iray taona, tsy misy kilema, ho sorona dorana tsy tapaka. 4Ny iray amin'ireo zanak'ondry, haterinao ny maraina, ary ny iray haterinao amin'ny àty takariva; 5ary ny lafarina tsara indrindra ampahafolon'ny efah, voadity tamin'ny diloilo oliva voatoto, ampahefatry ny hina, hatao fanatitra. 6Sorona dorana tsy tapaka izany, izay efa natolotra tao an-tendrombohitra Sinaia, ho hanitra mahafinaritra, dia sorona atao amin'ny afo ho an'ny Tompo. 7Ny fanatitra araraka momba azy dia ampahefatry ny hina amin'ny isan-janak'ondry iray, ka ao amin'ny fitoerana masina, no hanaovana ny fanatitra araraka amin'ny divay madio ho an'ny Tompo. 8Ny zanak'ondry iray haterina amin'ny àty takariva; hataonao toy ny nanaovana ny fanatitra tamin'ny maraina, mbamin'ny fanatitra araraka momba azy. Sorona atao amin'ny afo izany, ho hanitra mahafinaritra amin'ny Tompo.
9Amin'ny andro sabata kosa, dia zanak'ondry roa, efa iray taona, tsy misy kilema, no haterinao, ary lafarina tsara indrindra roa ampahafolony, voadity tamin'ny diloilo, hatao fanatitra, mbamin'ny fanatitra araraka momba azy. 10Sorona dorana amin'ny sabata izany, atao isan-tsabata, manampy ny sorona dorana tsy tapaka, mbamin'ny fanatitra araraka momba azy.
11Amin'ny voaloham-bolanareo, ny haterinareo ho sorona dorana ho an'ny Tompo dia vantotr'ombalahy roa, ondralahy iray, zanak'ondry fito, efa iray taona, tsy misy kilema; 12ary lafarina tsara indrindra telo ampahafolony, voadity tamin'ny diloilo, hatao fanatitra amin'ny isam-bantotr'ombalahy iray; lafarina tsara indrindra roa ampahafolony, voadity tamin'ny diloilo, hatao fanatitra amin'ny ondrilahy; 13ary lafarina tsara indrindra iray ampahafolony, voadity tamin'ny diloilo, hatao fanatitra amin'ny isan-janak'ondry iray; sorona dorana atao amin'ny afo ho an'ny Tompo. 14Ny fanatitra araraka momba izany, dia divay antsasaky ny hina, amin'ny isam-bantotr'ombalahy iray, ampahatelon'ny hina, amin'ny isan'ondralahy iray, ary ampahefatry ny hina amin'ny isan-janak'ondry iray. Izany no sorona dorana isaky ny voaloham-bolana, dia isam-bolana, amin'ny volana mandritra ny taona. 15Ary osilahy iray koa no haterina ho sorona noho ny ota ho an'ny Tompo, manampy ny sorona dorana tsy tapaka sy ny fanatitra araraka momba azy.
16Amin'ny volana voalohany, andro fahefatra ambin'ny folon'ny volana, dia Pakan'ny Tompo. 17Ary ny andro fahadimy ambin'ny folon'izany volana izany, dia ho andro fety. Hafitoana hihinana mofo tsy misy lalivay hianareo. 18Amin'ny andro voalohany, dia hisy fivoriana masina; aza manao asa fanaon'ny mpiasa na inona na inona. 19Ary izao no haterinareo ho sorona amin'ny afo, sorona dorana ho an'ny Tompo, vantotr'ombalahy roa, ondralahy iray, zanak'ondry fito, efa iray taona, tsy misy kilema, 20ary ny hatao fanatitra momba izany dia lafarina tsara indrindra voadity tamin'ny diloilo telo ampahafolony, atao amin'ny ombalahy iray, roa ampahafolony amin'ny ondralahy iray, 21iray ampahafolony amin'ny zanak'ondry fito tsirairay avy. 22Ary osilahy iray no hatao sorona noho ny ota, hanaovana ny fanonerana ho anareo. 23Izany no hataonareo, ka tsy hajanona anefa ny sorona dorana isa-maraina, dia ny sorona dorana tsy tapaka. 24Isan'andro mandritra ny hafitoana no hanaovanareo izany; izany no fahana amin'ny sorona atao amin'ny afo, ho hanitra ankasitrahan'ny Tompo. Hataonareo izany, ka tsy hajanona anefa ny sorona dorana tsy tapaka mbamin'ny fanatitra araraka momba azy. 25Amin'ny andro fahafito, dia hisy fivoriana masina ho anareo, dia tsy hanao asa fanaon'ny mpiasa na inona na inona hianareo.
26Amin'ny andron'ny voaloham-bokatra, rahefa hanolotra fanatitra avy amin'ny vokatra vaovao ho an'ny Tompo hianareo, amin'ny fetin'ny Herinandro hataonareo, dia hisy fivoriana masina ho anareo, ka tsy hanao asa fanaon'ny mpiasa na inona na inona. 27Ary izao no haterinareo ho sorona dorana, ho hanitra ankasitrahan'ny Tompo: vantotr'ombalahy roa, ondralahy iray, zanak'ondry fito, efa iray taona; 28ary ny hatao fanatitra momba azy, dia lafarina tsara indrindra voadity amin'ny diloilo, telo ampahafolony isan'ombalahy, roa ampahafolony amin'ny ondralahy, 29ary iray ampahafolony amin'ny zanak'ondry fito tsirairay avy. Ary osilahy iray koa no haterinareo hanaovana ny fanonerana ho anareo. 30Hataonareo izany, ka tsy hajanona anefa ny sorona dorana tsy tapaka mbamin'ny fanatitra momba azy; ary izay tsy misy kilema no atero, miaraka amin'ny fanatitra araraka momba azy. >